Aragtida ruuxi | iyo hababka, muuqaalka, muuqaalada qofka aragtida kartaan ruuxi arkay
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Aragtida ruuxi | iyo hababka, muuqaalka, muuqaalada qofka aragtida kartaan ruuxi arkay
Aragtida ruuxiga ah iyo aragti ruuxiga ah, waxa ay ka tarjumaysaa image in ay maanka derjada ah, waxa la sheegay in falka ee arkaysid dunida in aan la arki karin. Ma qiimaynta aragtida ruuxiga ah Gaadhsiin video la saadaaliyey iyo fariin halkaas Su'aasha.
Sidee si ay u arkaan aragti ruuxiga ah
tusay waxay u ekaayeen ruuxiga ah waxaa jira in qof kasta, laakiin inta badan by, tusaale ahaan, ay noqdaan kala bar isha ama ay indhahana isku qabtaan, ee video iyo image on dambe ee indhaha Utsushidasu waa caadi. Ama waxa uu galay macluumaadka codka qof, xitaa haddii aadan indhahaaga xir Dadka qaar aragtida kartaan ruuxiga ah.
la riyada ku arkay ruuxa ah, taas oo lagu arki karaa Arkaysid wax
view ruuxiga ah waa jinni caadiga ah ilmaha masuulka ka.
dhammaan dadka ayaa loo sheegay in ay jiraan ruuxa mas'uulka, ruuxa mas'uulka macno ahaan, waa ruuxa si ay u ilaaliyaan aad, waxa uu soo saaray farriin ah in ay keenaysaa in ay ka badan oo wanaagsan tahay nolol.
sidoo kale lagu dari laga yaabaa in aragtida ruuxiga ah la gaadhsiiyo qof tashiga si aad u hesho farriin (ama sidoo kale loo yaqaan jinni oo masuulka wadahadal).
waxaynu nahay kuwa is fahan si fiican, laakiin waa arrin wax ka duwan in la sameeyo waxyi xoog leh sida "ruuxa loo arki karaa," "muuqasho arki karin." Marka kale oo aan ahayn jinni oo masuulka
, ee la soo dhaafay iyo mustaqbalka, nolosha ee la soo dhaafay (nolosha ee la soo dhaafay) Dadka qaar daawado iyo wixii la mid.
sidoo kale isticmaalo hab loo yaqaano qasabad, waxaa sidoo kale waa technology a keenta in diiwaanka Akashic iyo is sare.
The, si ay u dhigma channel, waa ficilka ee wax wada, sida inta jeer-ruxruxo. record
Akashic iyo waxaa, wax sida museum-maktabadda ee la soo dhaafay, hadda iyo mustaqbalka ee dhammaan kuwa haatan jooga ee caalamka oo dhan ayaa la diiwaan geliyay (dabcan isha, ma la arki karo in ay isha qaawan), jinsiga ka soo horjeeda in ay ka walwalsan tahay waxaa ka ee la soo dhaafay ama hadda, ama arkaysid mustaqbalka, aad jiid kartaa macluumaadka soo baxay, sida hadda ka mid ah dareenka.
is The sare, laakiin waxay ka dhigan tahay in macno ahaan naftaada sare dhinac-cabbir ah, oo waxaad ku tidhaahdaa yar oo dheeraad ah u fududahay in la fahmo, waxaan u malaynayaa in aad aad u malaynayso doonaa marka ay tahay xaaladda ugu fiican. Marka
si fiican u socda, xitaa haddii waxa aad, sida shaqada iyo jacaylka waa gebi ahaanba guul, waa inuu isagu lahaado waqtiga gobolka jabin karin.
maxaa yeelay is sare ma yeelan doonaan qof kasta, by view Ruuxa (qasabad) ah, waxay keenaysaa in is sare, ama fariimaha iyo talo aad ka heli karto naftaada-cabbir sare.
iyo fariimaha ka masuulka hab ruuxa-view, diiwaanka Akashic by qasabad De, wuxuu helayaa fariin ka Self Sare, iwm, waa qiimaynta aragtida ruuxiga ah waa in u sheeg Su'aasha ah.
sifo dadka in aragtida kartaan ruuxi Haddii ay tahay aragtida ruuxiga
, laakiin sidoo kale waxaa jira fikir ah in waxa muhiim ah la dhalin derjada dhashay, waxaa sidoo kale waa fikir ah in sidaas in ay tahay aragtida ruuxiga ah ee tababarka helay.
Waxaa sidoo kale labada of opinion yihiin, laakiin opinion intooda badan in in ay dadaal ku heleen haddii ay wax awood ahaan doonaa.
Dabcan, Sikh ama wadaad, sida Utah iyo itaconate, ka badan dadka u dhashay iyo sara kiciyey galay qoyska ka mid ah psychics badanaa waa waxyi waa xoog badan yahay, laakiin waxaa inta badan waxaa ugu duceeyey awoodda la dhalin, khasab ma aha oo kaliya in waxaa la ma go'aamiyo.
waxaa jira kala duwanaan shaqsi in xoog loo yeelo si daciif ah derjada, ama dad iyaga u gaar ah oo aan isku aragto dadka ogaysiiska derjada, qof kasta oo ka badan ama ka yar derjada ma yeelan doonaan oo kaliya.
On top of in, Oo tusniintii ruuxi u fiirsada kartaa in ka socda. (Halkii qasac, u nugul in ay awoodaan in)
? waxyi lagu dhasho waa dad xoog
? psychics ee qoyska ku dhashay iyo dadka kiciyey
? raran yihiin dadka tababarka helay
? sida waayo aragnimo u dhow-dhimasho (habaabay qarka u dhimashada shil ama jirro), obediently aqbalo oo aan dareen nacayb iyo shaki ka dhanka ah dadka
? dunida ruuxiga ah in ay xirtaan waxyooday soohdinta fursad wax sidoo kale soo bandhigi doona sida qofka in dadka
in ma noqon karo aragti ruuxiga ah oo dhinaca kale ah, si xun u saamayso hab nololeed ee aragtida ruuxiga karo.
? 're in cuntooyinka oo lagu daro qaadato sheyga kaliya
? had iyo jeer ku xanuunsado nooc ka mid ah stress
? meel dabiici ah ma,
100% taas oo ka dheregtay hirarka electromagnetic, sida qalabka guriga jajaban yahay ku dhowaad aan macquul ahayn inay sidaas tahay, laakiin arrintan ayaa sidoo kale sheegay in ay saameyn ku gudno aragti iyo derjada ma wanaagsana.
waa sida ay tahay in ay noqdaan habka riyada ku
ruuxiga ah sida ay aragti ruuxiga ah, si ay u dejiyaan ruuxa qeybtii isha, sida akhriska image ee dambe ee xirribaha, waxaa guud ahaan la sheegay in hababka leeyihiin Haa, laakiin aad jidka si ay u tagaan, sababtoo ah waa qof kasta, sababta oo ah baryid heli iyo sidaas ii sheeg wax u eg macalinka ku kalsoon tahay sida ugu fiican. Haddii ay jiraan psychics
sida yiqiin yaqaan, waxaa laga yaabaa in aad dadka dhageysato ah.
sidoo kale derjada ah oo samaynaya qiimaynta aragtida ruuxiga ah, ma aha oo kaliya isaga qudhiisa ayaa firfircoon ciyaaryahan ahaan, ama ku hawlan hawlaha si loo baro siminaaro iyo muxaadarooyin, iyo cayn kasta oo ah aragti ruuxiga ah ee siminaaro, iwm wax waa.
ugu horeysay, baryayaa dad xaqiijiyay sheegto, waa inuu ku soo bilowdo ka xaqiiqda ah in ay isku dayaan in ay ku daysadaan jidka odhan, waa habka ugu wanaagsan ee sidaa darteed waa aragti ruuxiga ah.
intaas ka dib aragti ruuxiga ah Kaliya sababtoo ah
aragti ruuxiga ah, waa ficilka ee arkaysid dunida ka mid ah tusaale ahaan, waxaa loo yaqaan Ganoderma in lagu arko ee la soo dhaafay. Sidaas darteed haddii ay jiraan wax dhibaatooyin ah, waxaad u baahan doontaa heshiiska.
? Bogsiiyey (Waxaa jira wax badan oo ka mid ah noocyada si bogsashada)
? talinta xagga ruuxa
? saxo ruxruxo
? sixitaanka aura
? jinni saarista
? saabsanaa isdaahirinta dalka
? dhismaha nadiifiskeeda u
- ama jinni saarista haddii bedelka
jinni oo xun jinniyo mas'uulka lahaa hantiyeen, ama bedeli jinni oo masuulka, waxaa sidoo kale waa in dhakhtar ku, sida goynta ruux in Toritsui dhismaha waa loo baahan yahay. Waxa kale oo kala duwan degree kasta oo dhib ah, waxaa sidoo kale waa wanaagsan daciif by psychics.
haddii, haddii aad doonaysid in aad weydiiso jinniyadu ay u aragto fikradaha qubarada, ma aha oo kaliya awood u leeyahay inuu arko dunida ruuxa, de markaas heshiiska, waxaa lagu talinayaa in aad doorato derjada a waxaa jira sumcad loogu daweeyo ruuxiga ah.
Q & A ka dunida ka mid ah aragtida ruuxiga
iyo ruuxa waa la arki karin in ay isha, waxaan qabaa waxaan shaki waxaa jira dad badan. Halkan waxaa lagu soo bandhigay in Q & A format soo qaado su'aalaha la is weydiiyo ee ku saabsan aragtida ruuxiga ah.
mustaqbalka sidoo kale qorshaynaysa in ay dar waqti kasta.
maxaa yeelay, maal-sheegistii, waxaa lagu si xun ugu qaybin karaa saddex nooc oo ah nolosha-Bok-waji (walaasha-I-yeela), aragti ruuxiga ah lagu tilmaamay inay tahay qayb ka mid ah aan (i).
nolosha statistics, Shui Feng, sida hore iyo magaca xukun, waxaa loogu tala galay in lagu fuliyo qiimaynta ah oo ay xogta tirakoobka.
maal-sheegaysa isticmaalaya waxyooday, ruuxi ah.
wajiga reading oo timir ah, sida wajiga wajiga, by a maal-sheegistii isticmaalaya waxyaalaha jidhka, maal-lagala baxo waa kaar tarot sidoo kale iyo madarad oo halkan lagu tilmaamay.
| qiimaynta aragti ruuxiga ah | hits iyo sumcad ah ee dib u eegista ruuxa dhabta ah telefoonka maal-sheegistii waxaa jira shaqo ee
waxaa shaxdan soo xigtay bogga site hogaanka. Maxaa yeelay, halkan taabto on kala duwan ee maal-sheegida iyo aragti ruuxiga ah, fadlan haddii uu jiro waqti aad.
1 noocee ah ee maal-sheegistii noqon doonaa aragti ruuxiga ah. Just, sababtoo ah aad rabto in aad i siin qiimaynta a aragti ruuxiga ah, aad had iyo jeer u baahan tahay inaad ka taxadartaa maxaa yeelay, maal-lagala baxo macnaheedu ma aha noqon aragga ruuxiga ah.
waxaa caadi ah si aad u weydiiso derjada haddii codsi ku saabsan aragtida ruuxiga ah.
Si kastaba ha ahaatee, dadka qaar ay sheegtay in qaar ka mid ah, inkastoo ay maal-lagala baxo waa derjada, talo qof wadatashiga ee isku dhafan oo maal-sheegistii isticmaalaya xogta tirakoobka isticmaalaya macluumaadka sida taariikhda dhalashada lagu daro aragtida ruuxiga ah maxaa yeelay, waxaa sidoo kale waa derjada kii, halkii uu yahay mid aynu aad u hubiso ka hor codsiga qiimaynta ah. psychics
iyo maal-lagala baxo ee qoondaynta shaqada, tan iyo jidka u qaybsan yahay mid aad u maqlana, ugu yaraan inta badan qeexidda maanka ku hayo, waxaa lagu talinayaa in jeeg fiican ka hor qiimaynta.
Isagoo ka hadlayay in maal-sheegida, iyo inaan anigu aadanaha derjada ah oo faal kartaan oo (I), waa qof ku caawin kara qiimaynta aragti ruuxiga ah.
ruuxi ah, by dareen lixaad ee derjada ah, laakiin waxaa la sheegay in si ay goortay arkayaan xoogga asalka aan la arki karin, aragti, waa u xoogga si ay u arkaan wax aan la arki karaa, laakiin waa in ay awoodaan in ay arkaan asalka ah.
aad ku noolaan karaan in watch sida in waxa uu ilaa hadda sameynayo ah, laakiin ma akhriyo sida dareenkooda. dareen waa yeelay, ma jiro mid ka eegno jirka isha asalka ah. Intaa waxaa dheer in ay aragti
, waxaa laga yaabaa in sidoo kale loo gudbiyo sida "daawashada fog", "daawashada fog," "clairvoyance".